Umbhalo ofihliweyo kunye neziqhagamshelwano: Ngaba ngokwenene bandise i-SEO yakho? - Ingcali ye-Semalt, uNatalika Khachaturyan unikela impendulo
Iimibhalo ezifihliweyo kunye neefowuni zakha umxholo wewebhusayithi yakho ephantse okanye engabonakaliyo kubantu abalayisha iphepha. Kubantu abenza i-SEO emnyama ye-hat, izibhalo ezifihliweyo yindlela eyona migaqo i-webmaster idibana nayo. Nangona kunjalo, lo mxholo ungabonwa yiikhomputha, ngoko ke uyingxenye yamagama aphambili ekuboniseni. Umbhalo ofihliweyo ukhohlisa iinjini zokukhangela ukulinganisa ulwazi lwewebhusayithi olungenakuba yinxalenye yokubonwa kwekhasi lewebhu.
Ukulandela uhlaziyo olutsha kwi-algorithm yokukhangela, i-Google ngoku iyakwazi ukufumana itekisi efihliweyo. Iwebhusayithi yakho inomngcipheko wokufumana isohlwayo kwisixhobo senjini yokukhangela. Kwiimeko ezinzima, elinye igama eliphambili lokugxotha ama-spac tactics lingakhokelela ekugqibeleni ngokupheleleyo kwisiseko sekhompyutheni ye-injini. Isiqulatho sesigxina Semalt , uNatalika Khachaturyan, uxwayisa ukuba kule minyaka edluleyo, ezinye iiwebhsayithi zinokuphakamisa ukuphakama ngokusebenzisa le qhinga kodwa kungabi khona.
Le ndlela yokukhohlisa ingaquka umxholo womsebenzisi kwiwebhu lewebhu kwifomu engabonakaliyo. Kubantu abaqhuba ukuSebenza kweeNjini zoKhenketho, umbhalo ofihliweyo awukwazi ukuncedisa nayiphi na iwebhusayithi ukuba ibe yinqanaba njengoko ibonakala ngokulula. Ayinayo impembelelo kwi-style = "decoration-decoration: akukho; umda-phantsi: 1px eqinile;" href = "https: // semalt..i-com / qa / search-ranking-tools.htm "> i-rankings rankings njengeyokuqala.Inye indlela abantu abangayisebenzisa ukubonisa umxholo ofihliweyo kukugqamisa iphepha lonke.Ukuba ucinezela" ctrl + A, "ukhetha yonke into kubandakanywa nomxholo ofihliweyo. Ungabonakala kwindawo ecacileyo apho unokuyikopisha uze uyihlanganise kwenye indawo ukukhetha.
Kukho iindlela ezininzi abantu abangazisebenzisa ukufihla itekisi kwikhasi lewebhu. Okokuqala, abanye abantu bangasebenzisa itekisi enombala ofanayo kwimvelaphi. Ngenxa yoko, le ngcaciso ayibonakali kumntu obheka kwiphepha lewebhu. Abanye abantu basebenzise amafonti amancinci kwiindawo zewebhu apho kukho ibhanki okanye ulwazi olongezelelweyo. Ukudibanisa idatha kunye nekhowudi okanye into inokwenza iincwadi zewebhu zifihliwe.
Izixhumanisi ezifihliweyo zivela njengeemibhalo ezifihliweyo, ngaphandle kokuba zivumelekile kuzo. Ngenxa yoko, umsebenzisi wewebhu unokufumana iindawo ezinxulumene nezixhobo ezingacacileyo okanye ezibonakalayo. Izixhumanisi ezifihliweyo azibandakanyi kwi-SEO ukusebenza kwewebhusayithi. Ukuxhunyaniswa kwabo akuvumeli ijusi yekhonkco ukufaka igunya kwigunya. Ngaphezu koko, isayithi sinokufumana isigwebo xa i-injini ye-injini ye-intanethi ibona amaninzi amaninzi afihliweyo.
Kwiziko lewebhu ezifana ne-e-trade sites ukwenza kakuhle kwi-ranking, kukho imfuneko yokufaka umxholo obonakalayo endaweni engabonakaliyo. Zonke iicatshulwa ezikhoyo kwiphepha lakho lewebhu kufuneka zibonakale kumsebenzisi. Kufuneka kwakhona ukuba zonke izixhumanisi zibe zibonakala. Ukujonga umxholo ofihliweyo kwikhasi lewebhu, unokugqamisa yonke into nge-ctrl + A okanye sebenzisa isikhombisi. Kwiimeko apho ukugqwesa kunombala ofanayo kunye nomvelaphi, cindezela ctrl + C kwaye unamathisele umxholo wekhasi lesofthiwe yokucwangcisa igama usebenzisa i-text kuphela yokukhetha inketho. Unokwenza uhlalutye umxholo kunye nezikhonkco ezifihliweyo ezibonisa njenge-permalink Source .